Tun Tun's Photo Diary: Orchard Fashion Step Out 2014
Who want to wear that hat? :P
Are they looking foraplace to sleep? :P
Model တွေ အကုန်လုံး တစ်ခေါက်စီ ဖြတ်လျှောက်သွားပြီးတော့ နောက်ဆုံးမှာ လာလမ်းအတိုင်း ပြန်လျှောက်ပါတယ်။ ဒီတခါတော့ အတန်းလိုက်ကြီး ပြန်လျှောက်သွားတာပါ။ ခုနက Model တွေ ပါပဲ။
မနှစ်က show ကို ကြည့်ချင်၇င် ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံ ၇ိုက်တာနဲ. ပတ်သတ်ပြီး ဝေဖန် အကြံပြုနိုင်ပါတယ်။း)
at 4/08/2014 12:36:00 AM